Agha Epic: Ocheeze – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Site na nchịkwa | Ọktoba 22, 2021
Gwuo egwu dị ka onyenwe na alaeze atọ wee duru ndị agha gị merie ala ọgba aghara. Mee obodo gị, teknụzụ nyocha, ma gbasaa ókèala iji kwalite mmepụta akụrụngwa. Jiri amamihe kacha mma were ndị ọchịagha gị na-eguzosi ike n'ihe kee ya ma buso ọtụtụ puku ndị egwuregwu ndị ọzọ ọgụ n'ịntanetị ozugbo! Ị nwere ike isonyere ndị enyi gị na njikọ aka iji too na imeri, ma ọ bụ ọzọ ị nwere ike ịghọ onye nche na-apụnara ụwa ihe dị ka anụ ọhịa wolf naanị ya. Emere ya bụ Unreal Engine 4, Agha Epic: Ocheeze na-eweta ahụmịhe ọkwa PC na mkpanaka. Nwee ahụmịhe odida obodo na ihu igwe, ma mejuputa ha n'ime atụmatụ gị. Iwu, merie, na-azọrọ ocheeze!
**Oge 4 Atụmatụ ọhụrụ**
Ọchịchị dị na nsọtụ ọdịda, ụwa nọkwa n’ọgba aghara. Ị ga-ahọrọ ịbụ onye nzọpụta nke usoro eze, ma ọ bụ ịbụ onye na-agbanwe mgbanwe ma guzobe alaeze ukwu ọhụrụ?
– 8 Ọhụrụ General
– 6 Ọhụrụ Tome nka
– 2 Na-emegide Nnukwu Ike, Họrọ Otu ị ga-eso
【Agụ egwu dị n'etiti narị narị ndị egwuregwu】
Soro narị narị ndị egwuregwu sonyere ọgụ egwuregwu ezigbo oge, mkpebi ọ bụla ị na-eme na-emetụta! Mwakpo zuru oke ma ọ bụ mbuso agha? Mmekọrịta ma ọ bụ onye iro? Họrọ atụmatụ gị nke ọma. Weghara ọdụ ụgbọ mmiri na ngafe iji wusie ọnọdụ gị ike, na-alụ ọgụ maka akụrụngwa akụrụngwa iji bulie mmepụta gị. Na-achị n'ọgbọ agha dị ka ezigbo ọchịagha.
【Emegharịrị ụwa nke alaeze atọ】
Banye na mmeri nke mere otu puku afọ gara aga, n'ime akụkọ ihe mere eme nke ọma nke alaeze atọ ahụ. Na-ahụ ọgụ nke ndị ọchịagha, a na-emejuputa atumatu sitere na Art of War, na ndị ọchịagha ama ama na-eche ibe ha ihu. Ị ga-enwe ike ịlanarị na ala ọgba aghara a ma mechaa nweta ocheeze ahụ?
【Ndị ọchịagha akụkọ ifo n'iwu gị】
Kpọọ ndị ọchịagha ndị isi obodo atọ ka ha sonyere gị! Ka ha bụrụ ọchịagha Guan Yu dị egwu, ma ọ bụ Marshal na-eguzosi ike n'ihe Jiang Wei onye nwara ịgbachitere alaeze ya ruo ọgwụgwụ. Onye ọ bụla nwere nkà pụrụ iche na ụdị ndị agha, jiri ha wuo ndị agha gị dị ike! A na-ahazi ndị ọchịagha niile na egwuregwu ahụ, e mere ka ha dị ndụ site na akụkọ ihe mere eme gara aga ma na-echere iwu gị!
【Mkọrịta, ngalaba, na ndị nche】
Ị bụ onye ọkpụkpọ otu ma ọ bụ anụ ọhịa wolf nke naanị ya? Dị ka onye ọkpụkpọ mmekorita, ị nwere ike ịlụ ọgụ na ndị enyi gị, merie ndị iro siri ike ọnụ ma nyere ibe ha aka ito eto. Ma ọ bụ ọzọ, ị nwere ike ịbụ onye na-eche nche na nke nwere ike imegharị ya, anụ ọhịa wolf nke naanị ya na-apụnara agha na ezigbo anụ. Ọ dị gị n'aka ịhọrọ onye ị chọrọ ịbụ.
【Ụwa dị adị nke nwere ala na ihu igwe dị iche iche】
Jiri ihe karịrị chọgharịa nnukwu maapụ ahụ 4 nde tile, zọọ ije n'agha-gi n'elu ugwu, osimiri, ọzara, oke ohia, na ala jụrụ oyi. Usoro ihu igwe zuru ụwa ọnụ ga-emetụta ndị agha gị, ndị ọchịagha, na n'ozuzu ọgụ irè. Jiri ala na ihu igwe dị ka uru gị, ma ị nwere ike imeri ndị iro nke yiri ihe a na-apụghị imetụ aka.
【Atụmatụ enwere ike na-akparaghị ókè】
Ọtụtụ narị nkà izugbe, 4 ụdị ndị agha na 28 iche iche, 6 ụdị agha dị iche iche, na usoro dị iche iche nwere ike iji ihu igwe mee ka ndị agha gị sie ike. Ị nwere atụmatụ na-akparaghị ókè ịhọrọ, jiri ha mee ihe nke ọma ma gosi amamihe gị!
**Nweta ozi ndị ọzọ gbasara Epic War: Ocheeze**
Weebụsaịtị gọọmentị: http://www.archosaur.com/epicwarthrones/
Ụdị sistemụ: Gam akporo 5.0 ma ọ bụ n'elu
RAM: 2GB ma ọ bụ karịa
CPU: Qualcomm Snapdragon 660 ma ọ bụ karịa
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Epic, Ocheeze, War
← EspritBoom – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike Ihe ịma aka squid: Egwuregwu vlanahụ – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →